MA SUURTOOBI KARTAA IN LA QABOOJIYO BERRY QODOBADA JIILAALKA: SIDA LOO SAMEEYO GURIGA - WIXII MARTIDA
Hawthorn midig caan ah dadku waxay keenaan daawo dhaqameed. Hawthorn waa isha dhabta ah ee fiitamiinada waxtar leh, sidaas darteed lagama maarmaanka u ah quruxdaada iyo caafimaadkaaga.
Hawthorn waa Berry cajiib ahtaas oo sidoo kale waa mid la mid ah. Dadka waaweyn iyo carruurta labadaba waxay ku cunaan farxad.
Hawthorn waxaa lagu kabi karaa sida dhulkeeda, oo si firfircoon ayuu midho u dhali doonaa, iyo duurka. Dad badan ayaa doorta in ay soo ururiyaan miro kulul iyo dhadhan fiican leh qoyskooda oo idil - tani waa arrin dhab ah, xiiso leh oo xiiso leh.
Hawthorn waxay leedahay waqtigeeda ubaxa. Sida caadiga ah, waxay ku dhacdaa mudada u dhaxaysa bartamaha Abriil iyo bartamihii May. Waqtigaan, waa lagama maarmaan in la ogaado geed oo ka mid ah miraha la jeexi doono iyo in la hubiyo in aysan jirin cayayaanka muuqda.
Haddii aadan adigu gashaneyn berri ahaan, laakiin aad doorbideyso inaad ka soo iibsato dadka kale - waxaad sidoo kale hubin kartaa xaalada geedkii kaas oo berry la ururiyey. Dabcan, waa wax aan la aqbali karin in la cuno miraha beeraha haddii ay jiri karto maadada iyo waxyaabaha kale ee aan fiicneyn.
Hawthorn waxay rabtaa in ay wax cuno oo keliya xilliga diiran, laakiin sidoo kale jiilaalka. Dabcan, tani waa suurtogal, laakiin sida loo qaboojiyo hawada iyo qaabkee ayaa u fiican in la ilaaliyo dhamaan guryaha faa'iidooyinka leh? Waxan kuugu sheegi doonnaa foomkan faahfaahsan ee ku xusan faqradaha soo socda.
Hawthorn waa berrida aadka u furan. Ma u dulqaadanayo qalajinta sidaas darteed qaar badan ma yaqaanaan sida loo kordhiyo noloshiisa. Dhanka kale, sida ku cad fikradda caanka ah, qabow wuxuu dilaa dhammaan fitamiinada iyo nafaqooyinka ay tahay inay ku jiraan berriga. Dhinaca kale, dhammaan nafaqooyinkaas waxay ku jiri karaan tiro yar, laakiin waad heli kartaa sanadka oo dhan.
Dad badan berry lumiyo hantidooda faa'iido leh sababtoo ah fadhiisin aan sax ahayn. Ma aha wax ku filan oo keliya in la dhigo berriga qaboojiyaha oo illow illaa muddo ah. Wax walba waxay u baahan yihiin habka saxda ah iyo haweenkaba maaha mid ka reeban. Qodobkan waxaan kuugu sheegi doonaa faahfaahin ku saabsan sida dhabta ah ee haweenku u barafoobi lahaayeen, oo markaa ka baxaya jiilaal dheer iyo qabow.
Hadda, markaan wax ka qabannay su'aasha ah: "Miyuu suurtogal yahay in la qaboojiyo hawada qaboobaha xilliga qaboobaha?", Hada waxa aynu sii wadaynaa habka loo diyaariyo berry.
Sidee loo diyaariyaa?
Hawthorn waxaa loo yaqaan dadka Ruushka taniyo wakhtiyadii hore. Qaar badan oo ka mid ah cabbitaannada hawada ayaa sameeyay oo cabay iyo sidoo kale kvass. Qaar ka mid ah haweenka ayaa loo adeegsaday cunto.
Muuqaalkan yar yar iyo midka aan u muuqan wuxuu awoodaa in uu ka hortago noocyada kala duwan ee cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, sidaa darteedna ku raaxaysta caan aan caadi ahayn. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad xasuusato in hawshu ay ku badan tahay bartamaha Russia, laakiin waxaa laga heli karaa Ural iyo koonfurta.
Berry waa mid caan ah. Iyadoo ku saleysan samee dhammaan noocyada cabitaanka khamriga ah iyo sabab wanaagsan. Hawthorn wuxuu ka qaybqaataa xaqiiqda ah in khamrigu uu sahlan yahay inuu dheefshiido marka uu galo dhiigga isla markaana si dhakhso ah looga saaro jirka.
Laakiin sida loo diyaariyo haweeneyda si ay u isticmaasho bilooyin badan? Sidee loo ilaaliyaa dhadhankiisa? Marwalba marwalba way jirtaa waana tani waa qaboojiye. Marka la qaboojiyey, hawada ayaa lumisa nafaqooyinka, laakiin maaha gebi ahaanba, laakiin dhadhanka waqtiga dhoobada ayaa isku mid ah. Sidaa daraadeed nala bilaabi.
Berry marka aad iibsaneyso ama aad qaadanayso waa in si taxadar leh loo baaraa. Ma aha inay noqdaan kalluun, midho qalalan, iyo berry la jajabiyey. Sidoo kale, haddii aadan soo dhaweynin berry aad u bislaaday - iska tuur.
Kala sooc taariikhda beeraha dhowr jeer. iyo marka aad hubto in aysan jirin laamo iyo caleemo oo iyaga ka mid ah - waxaad sii wadi kartaa marxaladda koowaad ee diyaarinta. Ku qor digsi biyo ah oo karkari. Sida ugu dhaqsiyaha badan biyuhu ay u bilaabaan xumbo, dabka demi oo ha sugin biyaha in ay hoos u dhigaan daboolka hoose.
Hadda ku rid moyaha biyaha kulul kuna sii daa ilaa shan iyo labaatan daqiiqo. Dhammaan wasakhda iyo qashin-qubka ayaa ka tagi doona berry oo ay sii socdaan. Inta kale ee ka mid ah waxyaabaha ka mid ah berry noqon doonaa mid cufan. Hadda ku rid miro ee drushlak oo iyaga ku dhaq biyo socda.
Marka xigta, ku rid dhuriga, kuwaas oo lagu qooyey shukumaan saxan. Isku day in aad dhigto beruud si ay u sii joogaan meel. Ka tag iyaga qalalan. Hadda oo bannaanbaxyada ugu muhiimsan ee loo sameeyo jiilaalka si ay u qaboojiyaan, waxaad sii wadi kartaa tallaabada xigta.
Waa maxay barafka?
Qalabka wax lagu dhejiyo ee ku jira qaybaha yaryar ee baakadaha. U hubso inaad xirto baakadahaiyada oo horay loo sii daayay hawada oo dhan.
Marka xigta, hubi goobahaaga qaboojiyaha. Heerka barafka waa in uu ahaadaa mid dhexdhexaad ah si ay khudaarta iyo miraha ka yimaadaan hypothermia ma luminayaan nafaqooyinka.
Si taxaddar leh u samee dib u eegida qaboojiyaha. Caleemaha waa in aan loo oggolaan in ay taabtaan hilib ama kalluun. Ku rid qayb gooni ah khudaarta.
Hawthorn Waxay qaboojineysaa heerkulku marka loo eego minus labaatan digrii ilaa shan iyo labaatan shan. Tani waa heerkulka ugu fiican. Heerkulka hoose ee haweenka ayaa siin kara casiirka, iyo heerkulka kor ku xusan wuxuu wax ku darsan doonaa xaqiiqda ah in berry si fudud ma haysan lahaa hantida faa'iido leh. Sidaa darteed, ka hor inta aadan ka saarin berry ah qaboojiyaha, hubi goobaha heerkulka.
Qodobka barafaysan waa in marka hore la geliyo bacaha. Dooro polyetylin joogta ah oo aan jabin doonin.
Sidoo kale hubi in taasi bacda ma uusan qoyanayn. Haddii kale, waxay ku dhajin doontaa qaboojiyaha.
Haweenku waa inay wadaagaan miraha iyo khudradda kaliya, laakiin xaalad kasta ha ahaato hilib. Hawthorn waa in lagu xiraa kooxo yaryar si looga hortago in dib loo dhigo. Xaaladdan oo kale, berry ayaa lumiya dhammaan wixii lagama maarmaan ah.
Hawthorn waxaa lagu keydin karaa qaboojiyaha ugu badnaan lix bilood. Nasiib darro, bilaha soo socda ayaa caqabad ku ah berrinkaas, waxayna u horseedi kartaa xaqiiqda ah in haweenku aysan si fudud u siinaynin dhamaan walxaha waxtar leh qabowga. Sidaa darteed, si aan u iloobin, ku soo lifaaq xusuusin ah qaboojiyaha nolosha nolol maalmeedka berry, ama ku qor baakada lafteeda.
Fursadaha la qaboojiyo
Tan iyo hadda, aad ogtahay jawaabta su'aasha ah: "Ma suurtogal ah in lagu xakameeyo miraha haweenka?", Falanqeyno fursadaha suurtogalka ah ee lagu xakameynayo. Qof ayaa xannibay hawada biyo, isagoo aaminsan in barafku si wanaagsan u ilaaliyo sifooyinka miraha. Qof ayaa ku daraa miraha kale berrida.
Hal jid ama mid kale, laakiin qaboojinta hawo-mareenku waa hab-jajab iyo jahwareer lehDhammaan ka dib, su'aasha waxay noqoneysaa haddii nafaqooyinka lagu keydsado berri iyo haddii kale. Taasi waa sababta ugu horreysa ee lagama maarmaanka u ah inaad barato dhammaan hababka barafka hawada, diyaarinta jiilaalka, taas oo lagama maarmaan u ah. Waxaa suurtogal ah in qaar ka mid ah siyaabaha aysan kaa caawineynin inaad badbaadiso faa'iidooyinka berry.
Hawthorn waa aad u dhadhan fiican leh iyo caws iyo caafimaad lehSidaa daraadeed, waa inaadan khatar galinin sifooyinka faa'iidooyinka leh si loo sameeyo tijaabadaada. Waxaa fiican in la tixraaco talo-bixinteena kadibna, gabi ahaanba waa hubaal, waxaad maamuli doontaa kaydka jiilaalka ka kooban ee berry delicious.
Qaado su'aasha sida loo xakameynayo hawada guriga dhexdeeda, oo leh ciribtirka oo dhan, laga yaabee markaa waxaad si sax ah u qiimeyn doontaa hadiyadda oo dhan ee dabeecadda lagu uruuriyay hal cows oo casaan ah.